The Ab Presents Nepal » मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) :
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) :
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) :
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) :
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) :
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) :
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) :
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) :
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) :
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) :
धार्मिक÷सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । मानसम्मान र प्रशंसा प्राप्त हुने सम्भावना छ । पारिवारिक समस्याहरू हल हुनेछन् । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता आउने छ । पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुनेछ । रोकिएका काम सुरु गर्ने वातावरण बन्नेछ । सामाजिक कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुनेछ ।